Muuri News Network » RW Kheyre oo ka cabsi qabo in waayo baasaboorka Norwijiyanka ah iyo warar shegaayo
RW Kheyre oo ka cabsi qabo in waayo baasaboorka Norwijiyanka ah iyo warar shegaayo
Reysulwasaaraha Soomaaliya, Hassan Cali Kheyre ayaa magaalada Davos ee dalka Switzerland maanta kula kulmay reysulwasaahara Norway, Erna Solberg. Kheyre iyo Solberg ayaa sanadkan ka wada qeybgalayay shirka sanadlaha ah ee madasha dhaqaalaha aduunka ee WEF.
Waxyaabaha uu Kheyre u yimid shirka madasha dhaqaalaha aduunka ayaa waxaa ugu muhiimsan sidii uu maalgalin ugu heli lahaa mashruucyada horamarin oo xukuumadiisa ay rabto inay fuliso gudaha Soomaaliya.
Sida uu qoray wargeyska Dagbladet, Kheyre ayaa Solberg kala hadlay sidoo loo xoojin lahaa xiriirka iyo wadashaqeynta dalalka Norway iyo Soomaaliya, kaas oo soo socday sanado badan.
FRP hala ila soo xiriiraan:
Kheyre ayaa wargeyska Dagbladet u sheegay in xisbiga xagjirka ah ee FRP ay lasoo xiriiri karaan, hadii ay dhibaato ku qabaan baasaboorka norwiijiga ah ee uu heysto. Hadalka Kheyre ayaa dabo socdo, hadal horey uga soo yeeray afhayeenka xisbiga frp ee dhanka soo galootiga, kaas oo ahaa in Kheyre laga ceshto dhalashada Norway, maadaama uu dal kale madax u noqday. Wuxuuna arintaas ku sababeeyay inay calaamad su aal ka imaan karto dalka uu qofka heysto dhalashada labo jinsiyadood uu daacad u yahay.
Ninka hadalkaas dhahayo waa Keshvari oo laftirkiisu asal ahaan kasoo jeedo dalka Iiran, Norweyna kheyre uga soo horeeyay sadex sano oo kali ah.